Ukuhlaziywa kwoluhlu lweemodeli zemoto ze-TPE ngo-Matshi 2021
Thina uShaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd igxile ekwenziweni kweemethi zemoto. Singahlaziya iimodeli zemethi yemoto ngokukhawuleza okukhulu. Ukuba iimodeli zeemoto ozifunayo azibandakanyi kuluhlu lwethu lweemodeli, nceda unxibelelane nathi kwangoko, kwaye sinokuyigqiba ngokukhawuleza, wamkelekile ukuba une-3D laser ...
Xa sifuna ukuthenga iimethi zomgangatho wemoto, ungayifumana njani eyona mveliso ilungileyo? Unokukhangela kuGoogle nge "mveliso yemethi yemoto", emva koko unokufumana iiwebhusayithi ezininzi, kwaye kufuneka ugwebe ukuba yeyiphi imveliso yemethi yemoto oyifunayo, kwaye ujonge izinto zemethi zemoto yile nto uyifunayo. Kukho iqabane lomhlobo ohlukileyo ...
Izinto ezahlukeneyo kunye neepropathi zemata emethini zinendlela ezahlukeneyo zokuhlamba. Ubulukhuni bokuhlamba kukwahlukile, iimethi zemoto ngoku ziqhelekile ngezi zinto: ikhaphethi, iimethi zemoto zerabha, iimethi zemoto zepvc kunye neTPE / TPR iimethi zemoto. Makhe sichaze ukuba yintoni eyahlukileyo kwi-washin ...
Ungayisebenzisa njani imethi yakho yomgangatho wemoto kangangeminyaka engama-20?
Xa uba ngumama, unokuxakeka yonke imihla ukuqinisekisa ukuba wonke umntu osapho ukhathalelwe kakuhle. Awunalo ixesha lokucoca igumbi, kwaye awunaxesha lokucoca imoto yakho. Ixesha lithetha yonke into, awukwazi nokulinda umzuzu, kuya kufuneka ufumane indlela yokuzinika ikhefu. Ku ...
Ungazikhetha njani iiMatshu zeMoto yakho?
Xa uthenge isithuthi esitsha, kufuneka uthenge iimethi zemoto ngaxeshanye.We Huawo auto parts Co, Ltd zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zemethi yemoto kunye ne-trunk mat ukukhusela ingaphakathi lesithuthi sakho. yeyakho. Yeyiphi imethi yemoto efanelekileyo imoto yam? Xa undwendwela yethu ...
Zingaphi iimodeli zemoto esinazo?
IHuawo Auto Parts Co., Ltd yifektri yemata yeemoto TPE ivelise izinto ezininzi zokubumba iimethi zemoto kunye nesiqu somthi. Sineemethi zemoto kunye nomboko womthi weToyota, Honda, Land Rover, BMW, Jeep, Porsche, Mercedes-Benz, Chevrolet, Cadillac, Ford, Nissan, Lexus, Audi, Das Auto, Volvo, Jaguar, KIA, Mazda, Tesla , Mitsubishi Motors, Bui ...
Kutheni izinto ze-TPE zinokusebenzisa kuShishino lweemoto
Ukusuka kwizitulo zamandulo zamadolo kunye neenqwelomoya ukuya kwiimoto zangoku, izixhobo zokuhamba zabantu beziphucuka. Ukuze ube nentuthuzelo ngakumbi, umatshini wemoto we-TPE ovelise imethi yemoto ye-TPE uvele kwindawo kawonke-wonke. I-Thermoplastic elastomer TPE yenziwe ngezinto ze-SEBE ezixutywe neoyile emhlophe kunye nokunye ...
I-TPE yemathiriyeli yemoto: ziziphi iingenelo zempahla yemoto ye TPE?
I-TPE ngokwenene luhlobo olutsha lwezinto ezinqabileyo ezinokuqina okuphezulu kunye namandla okucinezela. Ngokwe-ductility yemveliso kunye nokulungiswa kwezinto ze-TPE zinokuveliswa ukwenza inkangeleko eyahlukileyo. Ngoku, iimethi zomgangatho we-TPE sele zizezinye zezinto eziphambili ezenziwayo kwicandelo lokuvelisa kunye ...
Luhlobo luni lweemethi zemoto ezifunwa ngabantu abanqwenela ukuwela ilizwe!
Iimethi zemoto zibalulekile ekuqhubeni imoto yonke imihla, kwilizwe eliphambeneyo lithatha uxanduva lokulwa nesiliphu kunye nokukhusela umzimba wemoto.Kodwa isikhumba semoto semveli sisiphumo sokungena manzi ngokubanzi, asinakho ukuthwala amanzi anodaka xa unqumla ilizwe Kwangelo xesha, ubhetyebhetye bubi, unde ...
Imethi yeemoto ze-TPE ziindlela ezizayo kwikamva
Imethi yomgangatho weemoto iqhelekile kuwo wonke umniniyo, nokuba yeyivenkile ye4S njengesipho, okanye zithengeleni, imethi yemoto yindawo yokuqala yemoto oyifunayo. Njengokuqokelelwa kokungena manzi, ukungangcolisi, ukungatyibiliki, isithuthi esikhuselayo komnye wemethi yemoto, kwimarike yemoto ...
Ngokuchukumisa umhlaba yonke imihla, ungacoca njani ihabhu yezithuthi?
Imoto iqale njengesixhobo sokuhamba, ke iyasebenza ngaphandle kwemihla ngemihla, zininzi iintlobo zomhlaba, ezinye iindawo zinodaka okanye uthuli oluninzi, zimdaka kakhulu, ke indawo yemoto imdaka kakhulu, asinakuma ke, emva koko uyicoca njani indawo yeemoto? Vumela uShaoxing Huawo Auto Parts Co ...
Ukukhetha njani ubukhulu beemethi zemoto?
Ngoku phantse lonke usapho lunemoto, kwaye wonke umnini moto uyayithanda isithuthi sakhe Ukuze ugcine imoto icocekile, baya kuthenga zonke iintlobo zezincedisi zemoto, iimethi zonyawo lwemoto zibalulekile, kodwa ubukhulu beemethi zemoto ezahlukeneyo, ngoko ke ubukhulu bufanelekile? Iinqwelo zeenyawo zeemoto ziyahluka ...
Ukuhlaziywa kwoluhlu lweemodeli zemoto zeTPE ngoMatshi ...